SAT-IF CATV ဂီယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China SAT-IF CATV ဂီယာစက်ရုံ
CATV & Satellite Optic Receiver
Features 1.W မြင့်မားသော sensitivity optical detector နှင့်အတူ။ 2. CATV နှင့် L-band ဂြိုလ်တုဖိုင်ဘာချိတ်ဆက်ထားသောထုတ်ကုန်များတွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည် ၄၇ ～ ၂၆၀၀MHz ဂြိုလ်တုနှင့် CATV ဒီဂျစ်တယ်နှင့် Analog အချက်ပြသည့် optical fiber တွင်ရနိုင်သည်။ 4. ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်း, အသုံးပြုသူအတွက်ထည့်ရန်အဆင်ပြေသည်။ +0～ -13dBm မှ 5.Input ပါဝါ။ 6.It တွင်လျှပ်စစ်သံလိုက်အနှောင့်အယှက်ပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်သည်။ 7.High စွမ်းဆောင်ရည်ပေမယ့်စျေးနှုန်းနိမ့်။ ပုံကြမ်း Optical အလုပ်လုပ်ပုံကြမ်းပါ။
Micro CATV & SAT-IF Optical Transmitter ZST စီးရီး
ဖော်ပြချက် ZST စီးရီးအသေးစားဂြိုလ်တု optical transmitters များကိုလှိုင်းအလျားကွာခြားချက်အရ ZST1310M (1310nm) နှင့် ZST1550M (1550nm) အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်၊ output optical power သည် 0-10dBm optional ဖြစ်သည်။ ထူးခြားချက်များ ၁။ FTTH ကွန်ယက်များအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ CATV & SAT-IF အပလီကေးရှင်းများအတွက်သင့်လျော်သော 2.High linearity ။ 3.Excellent linear နှင့်ပြား။ 4.Single-mode ဖိုင်ဘာမြင့်မားသောပြန်လာဆုံးရှုံးမှု 5. GaAs အသံချဲ့စက်တက်ကြွစွာ devices များအသုံးပြုခြင်း။ 6. အလွန်နည်းပါးသောဆူညံသံနည်းပညာ။ 7. သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူတပ်ဆင်။ ၈ ။ အနီရောင် LED ...
CATV နှင့်ဂြိုလ်တု Optical Transmitter (ZST9526)
ထုတ်ကုန်များဖော်ပြချက် ZST9526 Satellite Optical Transmitter သည် ၄၇-၈၆၂ MHz နှင့် ၉၅၀ မှ ၂၆၀၀ MHz အချက်ပြကိုဖိုင်ဘာတစ်ခုတည်းတွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်အဆင့်မြင့်သောလိပ်ပြာ DFB လေဆာကိုအသုံးပြုသည်။ ကွန်ယက်များကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်အသစ်ပြောင်းရန် DWDM စနစ်အတွက် ITU စံလှိုင်းအလျားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုကြီးမားသော FTTH စနစ်အတွက် EDFA နှင့် EYDFA မှချဲ့နိုင်သည်။ CATV, DVB-S, Internet နှင့် FTTH တို့၏ပေါင်းစပ်မှုကိုနားလည်ရန်မည်သည့် FTTx PON နည်းပညာနှင့်မဆိုကိုက်ညီနိုင်သည်။ ZST9526 ဂြိုလ်တု Optical Transmittera...
Features 1.W မြင့်မားသော sensitivity optical detector နှင့်အတူ။ 2. CATV နှင့် L-band ဂြိုလ်တုချိတ်ဆက်ထားသောဖိုင်ဘာချိတ်ဆက်ထားသောထုတ်ကုန်များတွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၃. ၄၇ မှ ၂၆၀၀ MHz ဂြိုလ်တုနှင့် CATV ဒီဂျစ်တယ်နှင့် analog signal များဖြင့် optical fiber တွင်ရနိုင်သည်။ 4. ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်း, အသုံးပြုသူအတွက်ထည့်ရန်အဆင်ပြေသည်။ +0~ -13dBm ကနေ 5.Input ပါဝါ။ 6.It တွင်လျှပ်စစ်သံလိုက်အနှောင့်အယှက်ပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်သည်။ 7.High စွမ်းဆောင်ရည်ပေမယ့်စျေးနှုန်းနိမ့်။ ပုံကြမ်း Parametri Optical Working Wa ...
အင်္ဂါရပ်များ (၁) မြင့်မားသောအာရုံခံနိုင်သည့် optical detector ကိုအဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်လက်ခံသည်။ (၃) FTTx PON Tech နှင့်လိုက်ဖက်ညီမှု (၄) ကောင်းမွန်သောအပူဖြန့်ဖြူးခြင်း (၅) သုံးစွဲသူများစွာရှိသည့် HFC ကွန်ယက်များအတွက် (6) FTTx PON နည်းပညာနည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter ပစ္စည်းအညွှန်းများမှတ်ချက် Min Typ Max Optical Characteristics wavelengthing operating nm 1200 1600 Responsivity A / W .90.9 optical power range ရရှိခြင်း dB ...
ZSR2600MD L တီးဝိုင်းဂြိုဟ်တု optical လက်ခံပြီးတည်ဆောက်သည့် WDM
ကုန်ပစ္စည်းအကျဉ်းချုပ် ZSR2600MD L band satellite optical receiver သည် FTTH / WDM Fiber အတွက် Home network ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအထူးထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့ shell, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြည်တွင်း circuit ကိုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်လူနေအိမ်andရိယာနှင့်အိမ်သုံးဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကွန်ယက်အတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ built-in CWDM, RFTV operating လှိုင်းအလျား 1550nm ဖြစ်ပါတယ်။ 1310/1490nm လှိုင်းအလျားဖြတ်သန်းရတယ်။ EPON, GPON နှင့် ONU နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ■အတွက် ...